Adega do Porto - Biscoitos - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCarmo
Ibekwe malunga neemitha ezingama-70 ukusuka elwandle, indawo yokugcina iwayini endala, eyakhiwa ngo-1840, ibekwe kwindawo ephawulweyo yewayini, iye yatshintshwa endlwini. Sigcine kwaye sigxininise yonke imiba yemveli yendawo yewayini, efana ne-squeezer, i-oveni yamaplanga yesonka sokubhaka, itshimini endala, umgangatho kunye nesilingi yeplanga.
Ifenitshala ekhululekileyo nepholileyo: igumbi lokuhlala elineTV, amagumbi okulala ama-3 (iibhedi ezimbini ezimbini / enye enye); igumbi lokutyela kunye nekhitshi evulekileyo (ii-4 hotplates, i-microwave, i-dishwasher, umatshini wekhofi); elinye igumbi lokuhlambela linebhafu kwaye elinye lineshawari. Ikwanabo noomatshini bokuhlamba kunye nezomisi, ifenitshala yeterrace kunye nebarbecue. Indawo yokupaka.
Ibekwe malunga neemitha ezingama-70 ukusuka kwizibuko le-Biscoitos kunye neemitha ezili-150 ukusuka kumadama okuqubha endalo (kwizakhiwo zamatye ezinemvelaphi yogqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo) kwaye inebalcony enkulu enombono omkhulu wolwandle.
Iyona nto ibhetele kubathandi bokuzingela ngaphantsi kwamanzi, i-snorkeling, i-diving, ukuhamba kwindalo kunye nokuloba.
IneNdlela yeBhayisikile ngaselunxwemeni apho sinokubukela imisele yakudala yasemkhosini ukusuka kwiMfazwe yesibini yeHlabathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Carmo
Inombolo yomthetho: 56